Nvidia: mpamily manana olana | Avy amin'ny Linux
Nvidia: mpamily mitondra olana
Nvidia dia nanapa-kevitra ny hanala ireo mpamily vaovao azy avy amin'ny mpizara azy, ny GeForce 196.75 satria maro ireo mpampiasa no mitatitra hadisoana sy olana, eny fa na dia ny mamokatra ny karatra GeForce aza mandoro ny hafanana be loatra. Ny olana dia misy fiatraikany tampoka amin'ny fanaraha-maso ireo mpankafy video ireto mpamily ireto ka nahatonga azy hijanona tsy hiasa intsony. Toa ireo mpamily Linux farany indrindra ihany koa no manana an'io olana io: www.chw.net/2010/03/nvidia-problemas-de-driver-tambien-bajo-linux/
Nvidia Aaron Plattner dia namoaka fanambarana ofisialy milaza fa ny olan'ny hafainganam-pandehan'ny mpankafy dia hita ihany koa amin'ireo mpamily 195.36.08 ary 195.36.03 ho an'ny Linux, ireo mpampiasa mampiasa ireo kinova ireo dia tokony hamerina ireo mpamily amin'ny kinova taloha 190.53.
Tsia, tsy mananihany, fa nanamafy izany ianao Alberto Milone avy amin'ny lisitra Canonical. Manokana, ny vaovao dia toy izao manaraka izao, raha nohamafisin'ny loharanom-baovao avy Nvidia, ireo mpamily navotsotra farany dia manana bibikely mampidi-doza amin'ny fitantanana ny mpankafy sary amin'ny alàlan'ny rindrambaiko. Ity bibikely ity dia mahatonga ny, amin'ny toe-javatra sasany, mitsahatra tsy miasa ny mpankafy, mijanona ary miteraka hafanana be ny sary, na dia mitarika fampiratiana ireo zavakanton'ny sary aza ary amin'ny tranga ratsy indrindra dia ny fahafatesan'ny GPU.
Tena matotra izany. Fantatro ny trangan'ny mpiara-miasa nahita ny fiverenan'ny solosaina findainy hatrany amin'ny serivisy teknikan'ny mpanamboatra satria nijanona tsy niasa tamin'ny fomba miafina ireo sary. Amin'ireto tranga ireto dia misy ifandraisany indrindra amin'ny olana iray ao amin'ny solder chipset. Fa amin'ity indray mitoraka ity dia matotra indrindra satria izaho koa manana solosaina finday misy sary Nvidia ary nieritreritra ny handao ireo mpamily 190.53 aho ho an'ireo ankehitriny ary azo antoka fa afaka mieritreritra ny hanavao ireo mpamilintsika isika rehetra. Ny vaovao tsara dia amin'ny tranga ratsy indrindra dia mbola eo ambany fiantohana ny laptop-ko, fa azo antoka fa misy ny mpamaky hita an'ity tranga ity ary tsy misy fiantohana intsony ny fitaovan'izy ireo. Ary izany dia ho raharaha be. Ary izany ve I Lucid Lynx dia mampiditra ny mpamily voakasik'ity bibikely ity (195.36.08).
Misy fiantraikany amin'ny mpamily ny bug 196.75, 195.36.08 ary 195.36.03. Soa ihany fa nampandrenesina ny fampandrenesana avy amin'ny forums an'ny Nvidia raha nesorina tamin'ny tranokala fampidinana ofisialy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia efa mailo ny Canonical ary manoro hevitra ny hampiasa mpamily maimaimpoana vaovao raha tsy misy na iray aza vahaolana amin'ity bibikely ity na amin'ny kinova alohan'ny Lucid dia ampiasao ireo mpamily 190.53 amin'ny toerana misy anao.
Misy feo manontany tena hoe inona no mitranga ao Nvidia ka manana izany lesoka izany izy ireo. Misy feo hafa manontany tena hoe maninona no ity fidirana mahavariana ity. Tsy tianay hitranga amin'ny olona izany, noho izany ny feon'ity lahatsoratra ity.
Doka an'ny Nvidia: http://www.nvnews.net/vbulletin/announcement.php?a=39
http://www.chw.net/2010/03/nvidia-driver-olana-koa-ambanin'ny linux /
Hita ao | Ubuntising ny planeta
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Nvidia: mpamily mitondra olana
Bernardo leon dia hoy izy:
Misaotra anao tamin'ny fampitandremana .. Tena mieritreritra ny hividy laptop amin'ny nVidia aho ary hametraka linux eo .. misaotra.
Valiny tamin'i Bernardo Leon
Efa nandalo fitsidihana 1000 izahay ary mpamaky 20 mahery no nisoratra anarana